Golaha Wakiilada oo xoog xukuumadu ku furtay mooshina soo dhigtay, Gudoomiye Cirro iyo Xildhibaanada Mucaaridka oo laga hor istaagay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on November 15, 2014 by sdwo · No Comments
SDWO Hargeia. Sidii qorshahu ahaa ee ay ciidanku ula wareegeen xaruntii golaha wakiilada ayaa saaka si qasab ah lagu furay kalfadhigii golaha wakiilada oo todobaadkii hore uu xidhay gudooomiyaha golaha wakiiladu . Xukuumada ay u adeegsatay la wareegida xaruntii shacabka golaha wakiilada ciidanka la dagaalanka aragagaxisada ee loo yaqaano RRU. Xarunta waxa laga hor istaagay inay gudaha u galaan gudoomiyaha golaha wakiilada iyo xubnaha taageersan ee mucaaridka ah. Sharci dhigaya in gudoomiyah laga hor istaago xaruntii uu gudoomiyaha uu ka ahaa ma jirto.
Kalfadhigiina waxa furay xubnahii muxaafidka ahaa ee taageersanaa xukuumada iyagoo halkaasna soo dhigay mooshinkii ay rabeen inay xilka kaga qaadaan Gudoome Cirro, hase yeeshee doodii mooshinka oo socota ayaa golaha waxa soo gaadhay oo gudaha u galay Xaaji Cabdi Waraabe iyo Saleebaan Gaal oo ku guntaday in la hakiyo fadhiga golaha wakiilada mudo 2 cisho ah si ay iskugu dayaan in waanwaan ku dhameeyo sidii doorkii hore, Sidaasina uu manta moshinkii muxaafidku wateen aanu ku meel marin.
Dhinaca kale xubnaha mucaaridka ah iyo gudoomiye cirro aya shir jaraaid ku qabtay hotel Emperial hase yeeshee waxa goobta markiidanbe uGu tegay ciidamo RRU da ah halkaasi oo ay xabsiga u taxaabeen 5tii xildhibaan ee uGu cadcadaa xildhibanaada mucaaridka ku ah xukuumada oo kala ah, Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble, Xildhibaan Ibraahin Mahdi Buubaa, Xildhibaa Bashiir Tukaale, Maxamed Saalax. Waxa kale oo maanta la xidhxidhay weriyayaal shaqadooda gudanayey si ay u gudbiyaan dhacdooyinka ka socoda xarunta baarlamanka kuwaas oo ka kala hawlgeleyey warbaahinta Hadhwanaagnews, Royal TV iyo Bulsho TV.
Gudoomiye Cirro ayaa shirkiisa jaraaid ku cadeeyey in xaruntii inqilaab meleteri ay xukuumadu ku qabsatay isla markaasna aan la furi Karin ilaa ciidanka qabsaday ka baxaan xarunta oo loo soo celiyo shacabka.
Agagaarka Hotel Emperial oo ciidan la dhigay maadama ay halkaas galeen Cirro iyo xubnahii mucaaridka ahaa
Dhinca kale wararka naga soo gaadhay xarunta gobolka togdheer ee Burco ayaa sheegay in mudaharaadyo balaadhani gilgileen magaalada iyadoo ciidanka RRU duna u adeegsanayo mudaharaadayaasha raasaas nool si ay u kala eryaan, ilaa hada wax khasaare oo ka dhashay intuu leegyhaya lama hubo, laakiin waxa wararku nagu soo gaadhayaan ilaa hal qof in la xaqiiyey inuu ku dhintay halka shan qofna ay ku dhaawacmeen rasaastii ciidanku dadka hoos ugu dhigay.